'ExactTarget' Waxay Qaadeysaa Adeegga Macaamiisha Heer Weyn (Bulsho) | Martech Zone
'ExactTarget' Waxay Adeeg Macaamiil Ka Dhigaysaa Darajo Weyn (Bulsho)
Khamiis, Juun 9, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Saaka, waxaan ka helay e-may ehellada Xaqiiqda taasi waxay sheegtey in boggooda macaamiishooda la casriyeeyey oo ay ku jiraan maaraynta kiisaska. Kani maahan wax macaamiil yar oo macaamiil ah, in kastoo! ExactTarget 3sixty waa shabakad bulsheed oo si buuxda u shaqeyneysa oo isku xiran oo isku xiran maaraynta kiiska, talooyinka alaabta, a maktabada tababarka iyo forums macaamiisha inay is caawiyaan.
Waan gaadhay Xaqiiqda maanta oo aad u sheegi lahayd inay ahaayeen guux hawada ka socda! Jeff Rohrs, Mitch Frazier iyo Stephanie Zircher dhammaantood waxay ii soo direen macluumaad aad u wanaagsan oo ay weheliyaan tirooyin horeyba u fiicnaa. Hambalyo waxay u tegeysaa Stephanie markii la bilaabay… waxay ahayd mid la yaab leh markii aan ka shaqeyn jiray dhinaceeda iyaduna waxay u qalantaa amaan iyada iyo kooxdeeda kor u qaadista cajiibka ah.
3sixty waxay hada leedahay in kabadan 13,000 oo xubnood
Ku dhowaad 100 fikradood oo macaamiisha lagu taliyay oo ku saabsan sheyga ayaa lagu sameeyay ra'yi celin ku saabsan 3sixty
Taageerada wax soo saarka caalamiga ah 24-7? khadka tooska ah iyada oo loo marayo BackOffice + taageerada taleefanka ee Macaamiisha Guusha
Meesha adeeg bixiyaha emaylku waa mid tartan badan. Waa feker hore u ah ExactTarget si xoogga loo saaro taageerada macaamiisha iyo adeegga macaamiisha. Waxaad email uga diri kartaa lambar kasta oo ka mid ah adeeg bixiyaasha emaylka ee internetka… waxay u egtahay in 1 uu soo ifbaxayo toddobaad kasta hadda. ExactTarget ayaa ka soocday inta badan ESPs iyada oo awood u leh in ay awood u yeelato fariin habeysan, firfircoon leh ka nidaamyada maaraynta waraaqaha ugu casrisan uguna dhaqsaha badan warshadaha.
Markaad ka shaqaysay ExactTarget, waxaan kuu sheegi karaa inay ka mid tahay kuwa ugu kartida badan iyo shirkadaha si fiican u hogaamiya ee Indianapolis. Waxaan ixtiraam weyn u hayaa kooxda halkaas, waxaanan ku riyaaqay waqtigaygii aan la qaatay shirkadda.
Tani runti waa kala duwanaansho weyn oo suuqa dhexdiisa ah… shirkad dhiirrigelisa awooddeeda u adeegidda macaamiishooda, oo aan si fudud u siinin wax soo saar. Hore ayaan u qoray fure u ah SaaS ma aha si fudud madal - laakiin awood u siiya dadka isticmaala inay ka faa'iideystaan ​​madal.
? 3sixty waxay noqotay goobta ay doortaan suuqleyda emailka inay lashaqeeyaan asxaabtooda si ay ugala hadlaan arrimaha hada socda ee suuq geynta ama nooga keenaan su'aalo ku saabsan softiweerka, shaqadiisa ama wixii arimo ah ee ay hada kala kulmaan arjiga ,? ayuu yiri Stephanie Zircher, saaxiib wanaagsan iyo Agaasimaha ExactTarget ee 3sixty. Soo bandhigida 'BackOffice' ilaa 3sixty waxay bixisaa barta kaliya ee barta bulshada ee warshadaha oo kaliya oo bixisa macmiil gaar ah oo keliya waxbarashadda, codsiyada taageerada iyo iskaashiga qadka.
Marka laga soo tago shaqeynta cajiibka ah, u adeegsiga badeecadda sidoo kale waa mid aad u fiican - oo leh astaamo kasta oo si nadiif ah loogu abaabulay gudigeeda. Waa codsi qurux badan:
IMHO, Shirkado waawayn oo tiro badan oo emayl ah kama heli doonaan adeeg bixiye emayl fiican suuqa. Waxaa jira tartamayaal waa weyn oo halkaas jooga, laakiin ExactTarget waa magaalo ay jecel yihiin.
Hubso inaad akhrido dhammaan War-Saxaafadeedka ku yaal ExactTarget's BackOffice.
Tags: isaaqlaura lippaycilmi baarista
Ayaa Qeexa Tiknoolajiyadda Shirkaddaada?
Kordhi Traffic Blog adoo nooleynaya Qoraallada Hore ee Blog
Jul 10, 2009 markay ahayd 9:52 AM
waad saxantahay . waxaa jira tartamayaal suuqa laakiin .. ExactTarget> kuwa kale
Ku qayli Seo
Jul 11, 2009 markay ahayd 10:13 AM
Farriin weyn. Waxaan isticmaalay cabsi muddo bilo ah waxaana igu adkaatay xoogaa mid ka mid ah baraha aan ku shaqeeyo. Waxay qaadatay cabsi bilo yar si loo xaliyo dhibaatada qalloocinta. Adeegga macaamilku wuxuu la shaqeeyey horumariyehayga intii suurtagal ah, si kastaba ha noqotee waxay aad u diidanaayeen in horumariyeyaashoodu ay eegaan arrinta.
Jul 13, 2009 markay tahay 1:37 PM
Waad ku mahadsantahay ereyada wanaagsan ee ku saabsan ExactTarget. Dhamaanteen waan ku faraxsanahay waxa aan sii wadno inaan ku guuleysano halkaas. Stephanie waa xiddig dhagax weyn hubaal. (dhadhanka weyn ee muusikada sidoo kale)
Adeegga iyo taageerada ayaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu qaddarinta badan ee SaaS. Maanta, ganacsiyada dhammaantood waxay ku tiirsan yihiin softiweerkooda iyagoo ah hawl muhiim ah. Kaliya looma dhaafi karo jaanis, ama kalsoonida la'aanta xalka guryaha lagu kobciyo iyadoo aysan jirin cid kaa dambeysa. Sida Scott McCorkle yiri, tani waa inay ahaataa 'markasta'.
Jul 13, 2009 markay tahay 2:29 PM
Waxaad sharad, Chris! Waxaan u maleynayaa inaad gabi ahaanba aad ku saxan tahay adeegga iyo taageerada lagu qiimeeyo. Mahadnaqna u leh Scott McCorkle - waa nin weyn oo hubaashii 'markabkii ayuu u jeedsaday' wuxuuna ku wajahan yahay ExactTarget jiho aad u wanaagsan. Dadweynow halkaas!